စာပဒေသာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 562
ညွန့်ထွေးဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၂ Myanmar Post ဂျာနယ် – ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ No tags for this post.
ဖိုးထက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၂ အခုတစ်လော ကျနော့်စိတ်တွေ ဖောက်ဖောက်နေသည်ဟုပြောလျှင် ရူးတော့မှာပေါ့ဟု ထင်စရာရှိသည်။ ကျနော်ဆိုလိုချင်သော သဘော က စိတ်အချဉ်တွေပေါက်နေမိချင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်ဖြစ်ရတာ အရာရာမှာ စိတ်အချဉ်ပေါက်စရာတွေ မနည်းမနော ရှိမည်ထင်သည်။ ကျနော်တို့လို နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်ထွက်လုပ်သူတွေအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား Passport အနီလေးကိုကိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရသည်မှာ စိတ်အချဉ်ပေါက်စရာတွေ များ လှသည်။ သံယံဇာတများတယ်ကွ..ကျနော် စိတ်အချဉ်ပေါက်တယ်။ မေတ္တာတရားနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာနိုင်ငံဘဲ..စိတ်အချဉ်ပေါက်တယ်။ ဘုရားစေတီ ကျောင်းကန်တွေနဲ့ ခင်မင်တတ်တဲ့ လူမျိုးတွေ နေတဲ့ နိုင်ငံကွ..ကျနော် စိတ်အချဉ်ပေါက်တယ်..မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငါတို့သွားလည်ရင် စိတ်ချရပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ လာမေးရင် စိတ်အချဉ်ပေါက်တယ်။ ကျနော် သီးမခံနိုင်လောက်အောင် စိတ်အချဉ်ပေါက်ဆုံးက မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ချို့ ပြုမူနေထိုင်ပုံတွေ။ ဒီမယ် ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်...
Page 562 of 564«1...560561562563564»
လင်းမိုးစွေ ● ရှေးရေစက်